कहिलेकाँही सामाजिक साधनहरू बन्द हुन्छन् Martech Zone
शुक्रबार, अप्रिल 30, 2010 सोमबार, फेब्रुअरी 10, 2014 Douglas Karr
हामी सबै यसको साक्षी छौं। यति धेरै माध्यमहरूको प्रयोगका साथ, हामी कम्पनीहरू, उद्यमीहरू, र फेसबुक, ट्वीटर, र कर्पोरेट ब्लगमा मानिसहरू र शोरको अनावश्यक रम्बलिंगको साक्षी छौं। यो धेरै हल्ला हो।
यो सधैं एक मुद्दा भएको छ इमेल मार्केटिङ… मार्केटरहरू आफ्ना मालिकहरूबाट प्रत्येक हप्ता ईमेल राख्ने आशा गरिन्छ। नतिजा स्वरूप, तिनीहरू गर्छन्। र यो बेकार छ। र रूपान्तरण भन्दा, एक सम्भावित सदस्यता सदस्यता रद्द गर्दछ।
ईमेल मार्केटिंगले तपाईको मनपर्ने सोशल मिडिया साइटमा स्थिति अपडेट बाहिर फ्याँक्नु भन्दा बढी मेहनत लिन्छ। यी नयाँ माध्यमहरूले कम्पनीहरूले कुरा गर्ने धेरै अवसर प्रदान गरेका छन् ... र केटाले त्यसो गर्छन्। मैले यी दिनहरू अधिक अनपेक्षित, सदस्यता रद्द गर्दै र अतीतमा गरेको भन्दा बढी अवरोधमा खर्च गर्दछु।
शान्त नहुनु मानिसजातिको स्पष्ट असफलता मध्ये एक हो। वाल्टर Bagehot
मेरो एक साथी (माफ गर्नुहोस् - म सम्झन सक्दिन जुन!) एक उत्कृष्ट विचारको साथ आएको थियो। ट्विटरमा पज बटन हुनुपर्दछ। यो सही मान्छे हो, हामीलाई ट्विवो चाहिएको छ ताकि हामी बकवास ट्वीट्सलाई छोड्न सक्दछौं र वास्तवमै महत्त्वपूर्ण भएको व्यक्तिहरूमा पुग्न सक्दछौं। हामी अनफलो गर्दै वा ब्लक गरिरहेका छैनौं ... तर हामी व्यक्तिलाई सूचित गरिरहेछौं कि तिनीहरू केवल बढि कुरा गरिरहेका छन्। एक साथी छ उसकी D&D मीटअप livetweeting? रोक्नुहोस्!
म अरूमा औंला औंला मात्र गर्दैछु! हालसालैका हप्ताहरूमा मेरो स्थिति अद्यावधिकहरू थोरै र धेरैको बीचमा भएको छ - म दिन २० घण्टा काम गरिरहेको छु मलाई केहि ठूला अवसरहरू प्रदान गर्न जुन मलाई दिइएको छ। के मैले याद गरे कि मसँग छ अब अधिक अनुयायीहरू र प्रशंसकहरू म भन्दा दिनको जुनै दिन म यापिंग गर्दैछु।
जब बोल्ने केहि हुँदैन भनेर समय बाहेक, त्यहाँ कहिलेकाहीँ तपाईले केहि भन्नु हुँदैन। म पनि यसको दोषी हुँ। कहिलेकाँही म अवसरको प्रतिरोध गर्न सक्दिन त्यहाँ एक व्यंग्यात्मक बम फेंक जब चीजहरू गडबडी हुन्छन् ... र यसले मलाई केहिमा गधाको जस्तै बनाएको छ। जस्तो एरिक डेकर्स एकदम यथोचित यो राख्नु, छवि सबै कुरा हो, ट्विटर सधैंभरि हुन्छ.
त्यहाँ आवाज ठूलो र ठूलो मानिसहरू प्राप्त भइरहेको छ। जबसम्म तपाईं पदार्थको कुरा भनिरहनु भएको हुँदैन, तपाईंको आवाज पृष्ठभूमिमा सुन्न नसक्ने बज बन्छ जुन सबैले सुन्न रोकिन्छ। सामाजिकको मतलब यो होइन कि तपाई सँधै कुरा गरिरहनुपर्दछ; वास्तवमा, सामाजिक हुन सक्छ सुन्ने बारेमा बढी अरू केहि भन्दा तपाईंको आवाजलाई आराम दिनुहोस् र के हुन्छ हेर्नुहोस्।
टैग: शान्तचुप लाग्नुमौनसामाजिक मिडिया रणनीतिवाल्टर bagehot
अप्रिल 30, 2010 मा 1: 21 PM
म पूर्ण रूपमा तपाइँका विचारहरू साझा गर्दछु, तपाइँका अनुयायीहरूलाई तपाइँको अर्को ट्वीट, पोस्ट, प्रक्षेपणको लागि उत्सुक हुनको लागि केहि आशावादी छोड्नुहोस्। त्यो भावना सिर्जना गर्न पाउनु त्यहाँ सबै समय बज हुनु भन्दा धेरै राम्रो छ।
मई 1, 2010 मा 9: 27 एएम
आमेन डग! मैले केही समयदेखि प्रचार गरिरहेकै कुरा यही हो। जब तपाईं कानाफूसी गर्न सक्नुहुन्छ किन चिच्याउनुहुन्छ? http://blog.cantaloupe.tv/blog/innovative-marketing/0/0/the-whisper-approach-to-online-video-marketing
जनवरी 16, 2011 7:47 बजे
यो यहाँ राम्रो जानकारी हो। मलाई लाग्छ twitter को महसुस गर्न गाह्रो छ। तपाईंले अरू सबैलाई ट्वीट गर्दै देख्नुहुन्छ र तपाईंले थप गर्नु पर्छ कि भनेर सोच्न थाल्नुहुन्छ। यो उपयोगी छ।